युटियल : टाप कि टाट ? « Gajureal
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १०:१३
अन्तत: टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी युटिएलका सञ्चालकहरु सम्पर्क विहिन छन् । पर्दा पछाडीबाट लेनदेनको खेला हुँदैछ वा कमिसनको झेला हुँदैछ, त्यो भविश्यले बताउला। तर, टाट पल्टिएर टाप कस्ने अवस्थामा पुगेको कुरो सोर्है आना सत्य हो।
यसले २०५१ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स पाएको थियो । र, लगानीको ठुलो हिस्सा भारतीय कम्पनीहरुको थियो। युटिएललाई लाइसेन्स दिंदै गर्दा सो प्रक्रियाको चर्कै बिरोध भएको थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी र ब्यबस्थापनले समेतले प्रश्न उठाउँदै आशंका गर्दै भनेका थिए – यो गाउँसम्म सेवा पुर्याउन होइन, कुस्त नाफा कुम्ल्याउन मात्र आएको हो !
उनिहरुको थप जिकिर थियो – यो युटिएल नामको जोगी भएर आउँनेछ ! सुरुमा प्रचारको खरानी मज्जाले घस्नेछ ! सजिला सजिला बस्तीमा पस्नेछ ! डेरा जमाएर त्यहीँ मात्र बस्नेछ ! हजारौँ मा शंख बेच्ने ! बजे पनि नबजे पनि किन्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ ! सबैबाट रकम संकलन गर्छ ! आफ्नो झोली भर्छ ! केहि समय फेरी लाउँदैन, चुपचाप लाग्छ, सबै निधाएको मौका पारेर झोला बोक्छ, थाहै नदिई सुइँकुच्चा ठोक्छ ! ठ्याकै त्यस्तै भयो ।
त्यसबेलाका निर्णयकर्ताहरुको जोड् अर्कै थियो । युटिएलको पक्षमा स्वर पनि चर्कै थियो ! उनीहरुको कुतर्क थियो- ‘नेपाल टेलिकमले मात्र सेवा बिस्तारमा भ्याउँन सकेन । नयाँ नयाँ सेवा ल्याउन सकेन ! प्रतिस्पर्धाले परिवर्तन आउनेछ। सेवामा बहार छाउनेछ !’ पृष्टभुमी र कार्यसम्पादनको रबैया र अहिलेको परिणाम हेर्दा उ बेला नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले गरेको विरोधलाई सत्य साबित गरेको छ ! साथै भन्न थालिएको छ – युटिएल टाट पल्टिएको होइन, पल्टाइएको हो !
आज त्यहि निर्णय अभिशाप भएको छ ! न पुरा गर्यो दायित्व करको ! न तिर्यो भाडा घरको ! न सेवा दियो, न थोत्रा सेट फिर्ता लियो ! काम गर्ने कर्मचारी सबै भोकै छन् ! राष्ट्रको धरोहर नेपाल टेलिकमका पाता कसेर प्राइभेट कम्पनीसँग लड्न पठाउने मनकारी तर द्रब्यप्रेमीहरुलाई अहिले कतै पोल्छ कि पोल्दैन होला !!